ဗီဒီယိုဂိမ်းအညွန်း: Resident Evil3Remake
ဂိမ်းအကြောင်း ရေးဖို့ စဥ်းစားနေခဲ့တာ အတော်လေး ကြာခဲ့ပြီ။ ရေးဖို့ ပြင်နေတုန်းမှာပဲ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ကာရိုနာ ရောက်ချလာရော (ကျွန်တော်တို့ဆီမှာတော့ လုံခြုံနေဆဲပေါ့) စာဖတ်သူတွေလည်း COVID-19 နဲ့ ပတ်သက်လို့ တားမြစ်ချက်တွေ သိထားပြီဆိုတော့ ဘယ်လိုလဲ အိမ်မှာနေရင်း ဘာဂိမ်းဆာ့ဖို့ စဥ်းစားနေလဲ?
ဧပြီလထဲမှာလည်း ရုံးပိတ်ရက်ရှည်ကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ အပျင်းပြေ ဆော့လို့ရအောင် Resident Evil3Remake အကြောင်း ပြောကြည့်တာပေါ့။
Platform: PC: PlayStation & Xbox
2 Remake ထွက်တုန်းက တအား အောင်မြင်ခဲ့တယ်၊ Digital Copy ချည်းကိုပဲ ၅ သန်းကျော် ရောင်းခဲ့ရလို့ 1999 တုန်းက Original Game ကိုပါ ကျော်တက်ပစ်တယ်။ 2019 မှာတောင် Game of the Year (Nomination) ရွေးချယ်ခံခဲ့ရလို့ ဘယ်လို ပြောမလဲ နောက် Sequel ထုတ်ဖို့ အရှိန်ရသွားတာပေါ့ဗျာ။
စောစောပိုင်းတုန်းကတော့ Resident Evil 8 ထွက်မယ် သတင်းသဲ့သဲ့ ကြားခဲ့ရပေမယ့် 2019 စက်တင်ဘာလောက်မှာ Project Resistance ကို ကြေညာသွားတယ်။ အဲ့မှာ သဲသဲကွဲကွဲ ဖြစ်လာတာက Project Resistance ကြောင့်ပဲလို့ ပြောရမယ်။
Image: Resident Evil Net
ဘာလို့လဲဆိုတော့ ပြသွားတဲ့ Gameplay Mechanic ၊ Character တွေက Umbrella Legacy အဟောင်းနဲ့ သွားချိတ်နေတာမလို့3အရင်လာမယ်လို့ သိခဲ့ရတယ်။ 8 ကိုတော့ နောက်နှစ်တွက် လျာထားပုံရတယ်။ သိရသလောက်ဆိုရင် Early Production စလုပ်နေကြပြီ။
အဲ့မှာ ကျနော်တို့ ရင်းနှီးနေကြ Chris တို့ Leon ၊ Claire တို့ မပါတော့ပဲနဲ့7တုန်းက Character (Rumoured – Ethan Winters) နဲ့ ဇာတ်လမ်းဆက်မယ်။ ကျနော့်ကတော့3Remake ထက် 8 ကို ဆက်စေချင်တယ်။ ဝင်ငွေကောင်းလို့ဖြစ်စေ ၊ Fans တွေအတွက်ဖြစ်စေ ပြန်ထုတ်ပေးတာ ကြိုက်ပေမယ့် ခြေရာအရမ်းထပ်နေပြီ။
ဒါဆိုရင် Resident Evil3က ဘာအကြောင်း ပြောချင်တာလဲ? ဘာကို ဇာတ်လမ်းတည်ထားလဲ? အတိအကျ ပြောရင်တော့2မတိုင်ခင် ၂၄ နာရီအလိုမှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းရာတွေကို သိရမယ်။
Gameplay ၊ Interactive UI ဒီဇိုင်းတွေ အကုန်လုံးက2နဲ့အတူတူပဲ (တချို့ ခပ်ဆင်ဆင် သရဲ အသေးစားတွေတောင် ပြန်ပါတယ်) ဒါပေမယ့်3က3သပ်သပ်။ DEMO ကစားပြီးသွားတဲ့အခါမှာ သဘောကျမိတဲ့ အချက်တွေရှိတယ်။ ဘာလဲသိရအောင် ဆက်ကြတာပေါ့
Trailer မှာ ပါတဲ့အတိုင်း Main Character ကို ကောင်မလေး Jill Valentine နေရာကနေ ကစားရမယ်။ Intro စတာနဲ့ Raccoon City တမြိုံလုံး ပျက်ဆီးနေပြီ။ Virus ကြောင့်ဆိုတာ သိထားပေမယ့် Resident Evil2တုန်းကလို မဟုတ်တော့ဘူး။
မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာက Sequel Story မှာ နောက်ကွယ်က ကြိုးကိုင်နေတဲ့ Umbrella ပါလာပြီ။ တိုက်ရိုက်ကြီး လာပတ်သက်တာ မျိုးမဟုတ်ပေမယ့် သက်သေတွေ ဖျက်ဆီးဖို့ ကြိုးစားနေတယ် (နောက်တမျိုး Operation Raccoon City လို့ ခေါ်တာပေါ့၊ ဒီဂိမ်းကိုတော့ 2009 မှာ ထုတ်ပေးခဲ့တယ် Remake မလာလောက်ဘူး ထင်ပါတယ်)
Umbrella ဖျက်ဆီးဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ သက်သေဆိုတာ သက်မဲ့ပစ္စည်းတော့ မဟုတ်ဘူး၊ Resident Evil Franchise ထိပ်ခေါင်၊ Villain အကြီးစား Albert Wesker ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ Raccoon City အထူးရဲတွေပါ။ ဒီကောင်တွေကိုတော့ S.T.A.R.S Members (Special Tactic and Rescue Service) ခေါ်တာပေါ့။
ဘာလို့ Pursue လုပ်ရတာလဲဆိုတာ အကြောင်းပြချက် ရှိပါတယ်။ စာဖတ်သူတွေ မြင်သာအောင် ပြောရရင် Resident Evil2မှာ T-virus ဖန်တီးရှင်လည်းဖြစ် G-virus ရဲ့ Precursor လို့လည်း ပြောလို့ရတဲ့ William Birkin ကို Assassinate လုပ်ပစ်တာပဲကြည့်လိုက်။
နောက်ပြီး Resident Evil0မှာ T-virus ဖြစ်လာမယ့် အရေးပါဆုံး DNA Strain ကို Queen Leech က ရခဲ့တဲ့ James Marcus ကို လုပ်ကြံပစ်တာနဲ့ စဥ်းစားကြည်လိုက်၊ Umbrella ကိုယ်တိုင်က တော်ရုံတန်ရုံ နယ်နယ်ရရ ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတောင် တန်ဖိုးမထားဘူးဆိုတော့ S.T.A.R.S Member တွေကို မျိုးဖြုတ်ဖို့ အသည်းသန်လုပ်နေလဲဆိုတာကို Resident Evil3မှာ တွေ့ရမယ်။
Rear Security & Bomb Disposal Specialist Jill Valentine (S.T.A.R.S Delta Squad) (Image: Inverse)
Main Character ကိုယ်တိုင်ကလည်း S.T.A.R.S Member ဖြစ်နေတဲ့ အဲ့မှာကြည့်ကောင်းပြီ။ ဘာလို့ မိုက်လဲ ပြောချင်တာက 1999 တုန်းက ထွက်ခဲ့တဲ့ Original Story ကစားဖူးရင် သိလိမ့်မယ်။ ပါးစပ်က S.T.A.R.S လို့ ရွတ်ရွတ်ပြီး အသားကုန်လိုက်ဗျင်းတဲ့ Nemesis ပါလာမယ်။
More than Worse
Early Demo မှာတောင် Nemesis ကို တော်တော်ကြီးကို ကြမ်းပြထားတယ်။ အရင်ကောင်တုန်းက ပြေးရိုက်တာ ၊ Grab တာမျိုးလောက်ပဲ လုပ်ခဲ့ပေမယ့် အခုဟာက Nemesis ရှေ့ရောက်သွားရင် ပြေးလို့ မလွတ်သလောက် နီးပါးပဲ။
အထာနပ်ရင်တော့ ရှောင်လို့ရတာပေါ့။ ဒါပေမယ့်2Remake ရဲ့ Tyrant တုန်းကလိုပဲ Nemesis ထွက်မယ့်နေရာကို AI နဲ့ Control လုပ်ထားတယ်၊ ဘယ်လိုမျိုးလဲဆို အမြဲတမ်း Character ရှေ့ ကြိုရောက်နေတတ်တယ်။
Nemesis Alpha with Flame Thrower in Remake Version (Original has Gattling Gun and Rocket Launcher)
ဝုန်းကနဲ၊ ဒိုင်းကနဲ အုတ်နံရံ ဖြိုဖျက်၊ ထွက်လာတာတို့ ၊ လှေကားတက်နေရင်း အပေါ်မရောက်ခင် ခေါင်းကနေကိုင်ပြီး လှမ်းဖမ်းတာမျိုးတို့ လုပ်လာတယ်။ ပိုဆိုးတာက Nemesis Alpha ဖြစ်နေတဲ့အတွက် လက်နက်ကိုင်ပြီး လိုက်ကြုံးတယ်၊ ဗျင်းတယ်ပေါ့ဗျာ။
တော်တော်လည်း စိတ်ပျက်ဖို့ ကောင်းပါတယ်။ သတ်ဖို့ထက် ပြေးဖို့က အဓိက ဖြစ်နေတယ်။ Original မှာတုန်းက Nemesis နဲ့ တစ်ခါတွေ့တိုင်း Knock Out လုပ်နိုင်ရင် ရှားပါး ပစ္စည်းတွေရတယ်။ Remake တော့မသိဘူး ဒါနဲ့ ဒီကောင့် Background တချက် ပြောကြည့်တာပေါ့။
ကျနော်က Fans အကြီးစားဖြစ်နေတာမလို့ Spoiler မထည့်တော့ဘူး။ Remake Trailer ကော Original Story မှာ ပါနေတဲ့ကောင်က Nemesis Alpha လို့ ပြောကြတယ် (လျှို့ဝှက်နာမည်က Hunter ဒါမှမဟုတ် Pursuer )
2 Remake မှာ ကျနော်တို့ တွေ့ခဲ့တဲ့ Tyrant နဲ့ ဘာကွာလဲ? ပြောရရင်တော့ Tyran ကို ဖန်တီးတဲ့ T-103 Virus ထက် အဆင့်မြင့်တယ်။ NE-Alpha Parasite ကို T-103 Strain နဲ့ Genetic Modification လုပ်ထားလို့ Nemesis T-type လို့ ခေါ်သေးတယ်။
Fan Made Nemesis Alpha Killing off S.T.A.R.S Member (Image: Sick Critic)
သိရသလောက် Nemesis တွေကို ဥရောပ သုတေသနစခန်းမှာ မွေးထုတ်တာဖြစ်ပြီး စစ်ဖက်ဆိုင်ရာ Elite Operation တွေမှာ သုံးဖို့ ရည်ရွယ်ခဲ့တယ်။ ဒီလို B.O.W (Bio-organic Weapon) ထုတ်နေတာသိလို့ S.T.A.R.S Member ဖြစ်တဲ့ Chris Redfield ကို စုံစမ်းခိုင်းခဲ့တယ်။
အဲ့ဒါကြောင့်2Remake အစမှာ Claire Redfield တယောက် သူ့အကိုလာရှာလို့မတွေ့တာနဲ့ တိုက်ဆိုင်နေတယ် (ပြောရင်တော့ Timeline ချိတ်နေတယ်ပေါ့) အဲ့လို Nemesis အများကြီး စမ်းသပ်ခဲ့ပေမယ့် Nemesis T-Type တစ်ကောင်တည်းကပဲ Combat Experience ရော Hunting Skill အပြည့်ရှိတယ်။
ဖြစ်ချင်တော့ Raccoon City မှာ ထိန်းမနိုင်၊ သိမ်းမရ ဖြစ်နေတဲ့ အခြေနေ ရောက်နေပြီ။ တဖက် အစိုးရကလည်း စစ်အင်အားနဲ့ Lock Down လုပ်ဖို့ ကြိုးစားနေပေမယ့် Umbrella Operative တွေနဲ့ တိုက်ပွဲအသေးစား ဖြစ်နေတယ်။
Jill faces off Umbrella’s top B.O.W Nemesis Alpha in Early Demo (Image: Game Informer)
Umbrella ရည်ရွယ်ချက်က ခြေရာဖျောက်ဖို့ ဆိုပေမယ့် Secret Virus Weapon ခိုးဖို့ လုပ်နေတဲ့ Third Party (အဲ့ကောင်တွေကို The Connections လို့ ခေါ်တယ် ၊ Resident Evil7ရဲ့ Not A Hero DLC မှာ The Connections အကြောင်းပါတယ်) ရှိနေလို့ B.O.W သုံးပြီး ဖြေရှင်းရသလို ဖြစ်နေတယ်။
3 Remake မှာတော့ S.T.A.R.S အဖွဲ့ဝင်နဲ့ Umbrella သစ္စာဖောက်ကောင်တွေပါ ရှင်းပစ်ဖို့ Nemesis T-type ကို Program သွင်းပြီး အပြတ်ရှင်းဖို့လုပ်တယ်။2Remake မှာ Leon ၊ Claire တို့ ကြုံခဲ့တဲ့ Stage-G ဆိုတာ သပ်သပ်တစ်ကောင် (Umbrella နဲ့ ဘာမှမဆိုင်)
Stage G3 Art in Resident Evil2Remake
Different Mutation Levels
G-mutation က Unlimited ဖြစ်တဲ့အတွက် Umbrella Legacy မှာ အကြမ်းဆုံး Viral Strain ၊ Host ကို တိုက်ရိုက်မကူးသလို Inject လုပ်ခံရရင်လည်း Cellular Level အထိ Mutation ဖြစ်နိုင်တယ်
Sherry Birkin ကို G-embryo ထည့်ခဲ့ပေမယ့် သားလောင်းအဆင့် မရောက်ခင် Control လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်၊ ဒါမယ့် အဲ့ကောင်မမှာ G-Mutation Effect ရှိနေတုန်း၊ Resident Evil6မှာ Regeneration Power ရှိနေတာနဲ့ သိနိုင်တယ်
ပြောချင်တာ3Remake က Resident Evil Franchise တစ်ခုလုံးရဲ့ Bridge လို ဖြစ်နေတယ်။4နဲ့5မှာ Umbrella Legacy ကျန်နေသေးပေမယ့် New Generation ၊ New Mutation ဖြစ်သွားပြီ (နောက်တခါကြုံရင် Resident Evil History အကြောင်း ဖော်ပြပါဦးမယ်)
Will you make her survive in the wake of Horror
ပြောတာလည်း ရှည်နေပြီ ပါးစပ်က S.T.A.R.S ရွတ်ရွတ်ပြီး ၂ ပေ အကွာလောက်ကို လောင်ချာနဲ့ တည်ထုတာ၊ ရုတ်တရက် လက်ကြီးထွက်လာပြီး လှမ်းဆွဲတာမျိုး ၊ နောက်က တရပ်စပ်လိုက်တာမျိုးထိ ကြမ်းတဲ့အတွက် DEMO ကို အရင် မြည်းစေချင်တယ်။
Official ဂိမ်းထွက်မယ့်ရက်က ဧပြီလ ၄ ရက်နေ့ပါ။ Project Resistance လည်း ပါလာမယ်လို့ သိရပြီး ဒီကောင့်ရဲ့ Beta Test ကို မတ်လ ၂၇ ရက်မှာ စတင်မယ်လို့ ကြေညာထားပါတယ်။
မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့မှာ မိတ်ဆက်သွားမယ့် Vivo S6